रेडियो ताप्लेजुङ मैदानभित्र र बाहिरका शक्ति गौचन
साउन २३ गते । ‘ल मानौँ एउटा व्यक्ति ६० वा ७० या यस्तै‘ वर्षसम्म बाँच्छ, त्यसमा तिमी कति वर्ष खेल खेल्छौ ? २० वर्ष ? ल यदि धेरै नै राम्रो खेलाडी रहेछौ भने २५ वर्ष ? त्यसपछि त तिम्रा जिन्दगीका मुख्य दिनहरु तिमीले खेलकुदको मैदानबाट बाहिर बिताउनु पर्छ, यसको मतलब क्रिकेटभन्दा धेरै अरु चिज छन् जीवनमा’, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले आफ्नो आत्मवृतान्त ‘प्लेइङ इट माई वे’मा आफ्नो पिताले बाल्यकालमा सिकाएको सिद्धान्तका बारेमा उल्लेख गर्ने क्रममा लेखेका उद्गार हुन् यी ।
सन् २००० मा मुम्बईसँगको नाता तोडेर भैरहवाको खुकुरी क्लबसँग जोडिन आइपुगे उनी । शक्ति पहिले ब्याट्सम्यान, त्यसपछि बलिङ, अलराउन्डर बनेका हुन् । शक्ति कप्तान पारस खड्कापछि धेरै नेपाली समर्थक माझ चिनिने अनुहारमा पर्दछन् । यसो हुनमा उनले उमेर समूहको प्रतियोगिता यु–१७, यु–१९ क्रिकेट र सिनियर क्रिकेट टिममा दिएको योगदान नै प्रमुख हो । सन् २००१ मा यु–१७ क्रिकेटमा बंगलादेशविरुद्ध कप्तानी सम्हालेर उनने नेपालको प्रतिनिधित्व सुरु गरे । उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी समय खेलेका र कप्तानी गरेका भएकाले पनि होला उनी चर्चित छन् । तर उनको यो यात्रामा थकाली परिवारले पछि मात्र साथ दिएको हो । १२र१३ वर्षको उमेरमा उनले क्रिकेट खेल्छु भन्दा दुई दिदी सुमित्रा र बबितामा कान्छी बबिताले परिवारसँग लडेर शक्तिलाई क्रिकेट मैदान पठाएकी थिइन् । जब नेपालको लागि उनले एकपछि अर्को सफलता पाए तब परिवारको साथ मिल्दै गएको थियो ।
१८र१९ वर्षको यो लामो यात्रामा उनको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रको समापन एक हिसाबले स्मरणीय र सफल रह्यो । टिमको गार्ड अफ् अनर पाए । त्योभन्दा बढी उनको पृथक शैली क्याच गरेपछि पूरै मैदान दौड्ने त्यो एकदिवसीय क्रिकेटमा पनि देखाउन भ्याए । वसन्त रेग्मीको बलिङमा उनले मिड विकेटमा डच टोलिका कप्तान पिटर सेलारको क्याच लिएपछि अन्तिम खेलमा उनको त्यो चर्चित स्टाइल अन्तिम खेलमा पनि हेर्न पाए ।
भैरहवाको पुरानो क्लब खुकुरी क्लबवाट क्रिकेट खेल्दै शक्ति नेपाल छिरेका थिए । उनको पहिलो भेट प्रशिक्षक जंगबहादुर थापा तथा उनका छोरा क्रिकेटर अन्तिम थापासँग भएको थियो । ‘पहिलो चोटी उ रंगशालामा छिर्दा उसको हातमा चोट लागेको थियो, ब्यान्डेज लगाएको थियो, उ यति सरल र बोली यति नम्र थियो कि, त्यो दिन चिनेको र बोलेको शक्ति र आज १७र१८ वर्ष पछिको शक्तिमा केही फरक छैन, उ त्यस्तै सरल र मिहिनेती छ’, बाबुछोरा दुवैको भनाई एउटै थियो ।
गएको वर्ष उनी नामिबियामा डिभिजन –२, खेलिरहँदा उनका बुवा अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालको कोमामा थिए । तर शक्ति आफ्नो प्रदर्शनमा कति पनि विचलित भएनन् । उनी देशका लागि सबै पीडा भुलेर मैदानमा प्रस्तुत भए । तर नेपाल पुगेपछि पितालाई गुमाउँदा शक्ति पहिलो पटक सबैका सामू भक्कानिएका थिए । सधै हाँसिरहने शक्ति के अरु बेला कहिल्यै रोएनन् त रु ‘प्रत्येक पटक नेपालले खेल हार्दा म रोएको छु तर मनमनै, आखिर म पनि मान्छे नै हूँ’ शक्तिले जवाफ दिए ।
गएको साउन २ गते क्रिकेटबाट उनले विश्राम लिए । तर उनले दिदी बबितालाई भने नेदरल्याण्ड्सबाट फर्किएपछि मात्र सन्यासको खबर सुनाए । कान्छी दिदीलाई यो खबरले उदास बनायो तर उनले निर्णय लिइसकेका थिए मैदान बाहिर बस्ने । ‘क्रिकेटबिना के गर्छस् रु’ शक्तिलाई दिदीको प्रश्न थियो । यो उनको मात्र होइन धेरैको प्रश्न थियो । तर नेपाली क्रिकेट र नेपाली क्रिकेटरलाई नजिकबाट चिनेकाका लागि यो प्रश्न क्जबपतष्(त्जभ एयधभच को हकमा लागू नहुने तर्क हुन् । तेन्दुलकरले लेखे जस्तो ‘क्रिकेटभन्दा अरु धेरै कुरा जीवनमा छन्’ भनेजस्तो अब ती धेरै कुराहरु शक्तिका लागि के–के हुन सक्लान रु भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने स्थिति छैन। एउटा राम्रो क्रिकेटरभन्दा एउटा राम्रो मान्छे भएको हेर्ने इच्छा तेन्दुलकरको पितालाई थियो । शक्तिको पितालाई आफ्नो छोराले देखासिखी नगरोस् भन्ने थियो । उनी सदैव उस्तै रहे । क्रिकेटरभन्दा माथिको एउटा असल व्यक्तित्व ।
स्रोतःउज्यालो अनलाइन,लेखिका पवित्रा राउत